Nnwom 64 NA-TWI - Ogye ho mpaebɔ - Mewɔ ɔhaw mu, - Bible Gateway
Nnwom 63Nnwom 65
Nnwom 64 Nkwa Asem (NA-TWI)
64 Mewɔ ɔhaw mu, Onyankopɔn, na tie me mpaebɔ! Misuro m’atamfo; gye me nkwa. 2 Bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo ne nnebɔneyɛfo dɔm nsam. 3 Wɔsew wɔn tɛkrɛma sɛ nkrante na wɔpɛ atirimɔden nsɛm te sɛ agyan. 4 Wɔnkyɛ atorosɛm a wɔn ani nwu ne ka ho. Wɔka nnipa pa ho nsɛm a enye de sopa wɔn. 5 Wɔhyɛ wɔn ho nkuran wɔ wɔn amumɔyɛ nneyɛe ho. Wodwen baabi a wobesum wɔn firi ho na wɔka se, “Obiara renhu wɔn.” 6 Wɔhyehyɛ amumɔyɛ ho ka se, “Bɔne nhyehyɛe a yɛayɛ yi ho nni asɛm.” Onipa koma ne n’adwene yɛ anwonwade.